Blog Action Day: Feon’i Afrika sy ny diaspaora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2007 15:19 GMT
Anio dia lohahevitra tokana no hobanjinin’ny mpibilaogy maro dia ny tontolo iainana. Nandray anjara betsaka tamin’ny alalan’ny endrika sy fomba fanoratra samihafa ireo mpibilaogy avy eto Afrika sy avy any ampielezana.
Ireto manaraka ireto ny rohy sy ny sombiny avy ao Kenya, Afrika Atsimo, Nizeria ary avy amin’ny hafa ihany koa.
Nametraka i Afrigadget fa ‘Where others see junk, Africa Recycles’. (Ahodin’i Afrika ho zava-baovao hafa izay heverin’ny hafa ho efa fanary ). Sary nalain’i Simon the blacksmith ahitana ireo singatsingam-by avadika ho sarivongam-biby.
Phil ao amin’ny Kenya environment news kosa namoaka lahatsoratra roa, ny iray dia milaza momba ny ‘Fiovan’ny tontolo iainana sy ny valan’aretina’ ary ilay hafa kosa miompana amin’ny‘fahantrana sy ny tontolo iainana’
Miankina amin’ny tontolo iainana ny olona mahantra tsy ampy fidiram-bola hahazoany ny filàna fototra tahaka ny rano, ny sakafo ary ny fialofana. Rehefa mihasimba ny tontolo iainana (amin’ny ankapobeny) dia ho baraingo tanteraka izay mety ho fanapaha-kevitr’ireo olo-mahantra ireo ho fanatsarana ny fiainany. Ka raha mbola miankina tanteraka amin’ny tontolo iainana izy ireo dia tsy ho tontosa velively ny fampihenana ny taham-pahantrana.
Manoratra avy ao Nairobi, Kenya i Rob : ‘Fialantsiny ifanarahana’ mahita fifandraisana amin’ny fiovan’ny toetr’andro sy ny ady ao Darfour. Mijery ny anjara sazy iraisana noho ny fiakaran’ny maripana manerantany mianjady manokana amin’ny fiainan’ireo naomady (mponina mpifindrafindra) ao avaratry Kenya izy.
Mzungu Chick kosa raha miresaka momba ny Zaha tontolo iainana ao Kenya, no manamarika fa…
Asehon’ny antontan’isa fa ny 12%n’ny toe-karentsika no avy amin’ny fandanian’ny mpizaha tany eo ho eo amin’ny 500 000 eo ho eo ny Kenyana mivelona amin’ny orinasam-pitaterana mpizaha tany, noho izany miankina aman’aina mihitsy io ka tokony hokarakaraina tsara.
Efa fantatry ny Kenyana tsara io ary efa miezaka tokoa hijery ny fampivoarana ny fizahantany mampidibola izy ireo no manandratra ny fomba amam-panao hiarovana ny tontolo voajanahary ary manatsara ny fari-piainan’ny fokonolona.
Kikuyumoja kosa manoratra ny zavatra tiantsika ho hita matetika kokoa, miainga avy amin’ny resaka fidiovana tsy mampiasa rano ka mankamin’ny q-tips [fampianaran-kevitra antsoina hoe q] vita amin’ny taratasy mihorongorona entina hanoloana ny plastika tsy mety mandevon-tena.
Rory ao amin’ny Carbon Copy no hamoaka andian-dahatsoratra ny 15 ka hatramin’ny 19n’ny volana Oktobra.
‘Shades of green’ [fiarovana ny maitso] no lahatsoratra navoaka voalohany tamin’izany andian-dahatsoratra izany.
Raha te-hahafantatra ny lala-tokana noheveriko ho zava-dehibe hiarovana ny tontolo iainana aho, dia hitako ihany fa ankavitsiana no hahitana vahaolana mazava tokana isaky ny misy fanamby apetraka : Hita mandrakariva fa maro ny fomba fiarovana ny maitso.
Tsy misy safidy maningana ka nety, tsy misy vahaolana avy amin’ny tontolon’ny zava-kanto alaina avy any amin’ny vata sarihana, tsy nisy fanao tsara avy amin’izao tontolo izao nalaina avy amin’ny firenena iray ka ampiharina any amin’ny firenena iray hafa.Mba hirosoana kokoa, misy ny dingana izay noheverintsika ho vahaolana tamin’ny fanamby nataontsika tsirairay avy, fa araka ny nitomboan’ny fahalalana sy ny fivoaran’ny haitao, dia mitombo tahaka izany ihany koa ny dingana [mety ho vita].
Nanontany I Eish‘Blog Action day[Andron’ny blaogy] – Nahoana no hifamaly?’ ary mitafatafa ny mahazava-dehibe ho an’ny tsirairay ny tontolo iainana, sady mampivoitra ny anjara-fanolokoloan’ny tsirairay eo amin’ny sehatra misy azy.
Mandray anjara amin’ny Manokatra takelaka amin’ny alalan’ny vaovao maitso koa I Turbosprout.
Flint.za indray mampahafantatra ny ‘herin’aratra mety ao an-trano’.
Nic ao amin’nySA Rocks kosa mirehareha amin’ny fireneny sy ny fahabetsahan’ny harena voajanaharyitahiana azy, ary mitantara izay misy amin’ny toerana vitsivitsy, ny biby sy ny zavamaniry ao Afrika Atsimo; ary mampirisika ny hafa hitandro hatrany ny hatsara-tarehin’I Afrika Atsimo.
Notes from the underground indray mametraka rohy momba ny Orthodox Environmentalism[fomba fanao hiarovana ny tontolo iainana]
Worksucks kosa mampianatra ny fomba hamerana ny fandanian-taratasy ao am-piasana.Sarah Manners ao amin'ny Quirk e-hay varotra manoratra ny‘famonjena izao tontolo izao, toraka blaogy amin’ny fotoanany’.
Szavanna indray mampahafantatra an’i Ben Saunders, mpamantatra ny any an-tendrom-bola-tany.
Jenty mamoaka sary maneho ny fandotoan-drivotra avy amin’ny fikarakarana zavamaniry (sasol) ho lasa menaka na solika, ary mampiditra ao koa ny resadresaka nifanaovany tamin’ny zanany efa-taona Bradley izay milaza ny heviny momba ny fahalotoan’ny rivotra.
Omodudu no manoratra momba ny Vinanin’i Niger ary mametraka fa:
Ity ny antsoko ao anatin’ny anarivony: Miangavy ny orinasa fitrandrahana solika ao amin’ny Vinanin’I Niger ao Nigeria izahay mba hanaja anay sy ny taninay aza fady indrindra.
On the Hill kosa mizara ny eritreriny amin’ny fikajiana ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fanolokoloana ny endriky ny vina (design), mampiditra ny karazan’endrika (na zavakanto) mampisy fiantraikany tsara amin’ny tontolo iainana.
Mila vakiana manokana kosa indray ny lahatsoratry Giamarro speaks mikasika ny Fianianana ampahibemaso
Aoka ho mora fo amin’ny hafa isika ary ho mora fo amin’ny tany ihany koa. Andao hijoro. Raha very ny tany, inona sisa no mijanona ho antsika?
Olompirenena amin’ny ankapobeny
Dan ao amin’ny Migrations blog no mijery amin’izay rohy rehetra azo jerena ny fanamarinana ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny fihenan’ny isan’ny vorona mpifindra monina.
Crisscrossed mandinika ny olan’ny e-fandanianamanerana ny tany, ary mitantara ny zava-marina tany India, Kenya, Ghana, Nigeria ary Shina.
Bluedreamer indray no milaza ny fikapana tsy ara-dalàna ny ala manerana ny tany.
Bazungubucks miteny hoe ‘Fankasitrahana avy amin’ny olon-drehetra’ raha mizara ny heviny sy mametraka ny rohin’ireo olona nanana fandraisana andraikitra hanolokolo ny tontolo.
Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra ny lahatsoratra be mpamaky ao amin’ny Nobaddays’ Ny laharam-pahamehana amin’ny trano hovidiany manaraka…iresahana ny fanasana lamba sy fanahazan-damba an-tokotany.
Isaorana manokana I Erik ao amin’ny WhiteAfrican izany nanampy tamin’ny fikarohana ny rohy maromaro tamin’ity lahatsoratra ity, isaorana ihany koa ny mpibilaogy rehetra nandray anjara tamin’ity andro manokana amin’ny lohahevitra iray ity.